people Nepal » भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालन अनुमति दिएन, किन ? भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालन अनुमति दिएन, किन ? – people Nepal
काठमाडौं – नेपालका विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका डेढ दर्जन कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको हो । यो निर्णय २०७२ फागुनमा भएको थियो । त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो ।